Soo -saareyaasha Bacaha Jilibka leh ee Tubular | Shiinaha Tubular Warshadda Bacaha Jumlada ah ee Labalaab
1 tan FIBC PP boorso weyn UV dheer ayaa lagu daaweeyaa gaarsiinta degdegga ah HT-2 ugu fiican
Boorka-caddayn: la damiyay (10-35g/m²)
Isticmaalka: ciidda iyo qalabka dhismaha, warshadaha iyo macdanta, kiimikada iyo gaadiidka, beeraha iyo wixii la mid ah.
Tolidda: tolidda caadiga ah, silsilad laba jibbaaran, ka badan tolidda qufulka
Astaamaha: Biyo-caddeyn, biyo-caddeyn, iyo boodh-caddeyn
Daaweynta UV -heerka caadiga ah standard heerka muddada dheer.
Tuubbo labalaab ah oo duuban Bulk Bag HT-32
Naqshaddan cusub ee qaab-dhismeedka tuubada ayaa si fiican ugu habboon sidii xulasho aan ku xirnayn oo ah alaab wanaagsan oo aad u sarreeya. Sidoo kale waa beddel aad u fiican dhismihii bacda jumlada ahaa ee afar-guddi ee asalka ahaa
Qaab dhismeedka tuubada ayaa meesha ka saaraya tollihii dhinaca, taas oo hagaajinaysa baaritaanka iyo iska -caabbinta qoyaanka. Suunka naqshadda Isgoyska-ku-habboon ayaa ku habboon hawlgalka forklift.
Tuubbo labalaab ah oo duuban Bulk Bag HT-30
Dhismaha tuubada ayaa meesha ka saaraya tollihii dhinaca, taas oo keentay in la hagaajiyo kala -shaandhaynta iyo u adkaysiga qoyaanka. Xirmooyinka Naqshadaynta Koorneetka ayaa u oggolaanaya marin-u-helidda fudud ee forklift.
Bacaha koornaha iskudhafku waxay leeyihiin siddooyin lagu tolay jirka marada ugu weyn, mararka qaarkood lakabka xoojinta dharka toosan ayaa lagu daraa. Marka qaabka ay siddooyinku u noqdaan muhiim, boorsooyinkan ayaa ah doorashada koowaad. Naqshaddan waxaa loo adeegsan karaa dhammaan hannaanka tolidda, naqshadeynta soo -gelinta/ soo -bixidda iyo xulashooyinka xiritaanka kala duwan.
Tuubbo labalaab ah oo duuban Bulk Bag HT-29
Bacaha koornaha iskudhafku waxay leeyihiin siddooyin lagu tolay jirka marada ugu weyn, marmarka qaarkoodna lagu daro xoojinta dharka toosan. Boorsooyinkan ayaa la doorbidayaa marka qaabka loop qaadista ay muhiim noqoto. Naqshaddan waxaa lagu heli karaa dhammaan hannaanka tolidda, naqshadeynta soo -gelinta/dejinta iyo xulashooyinka xiritaanka kala duwan.
Tuubbo labalaab ah oo duuban Bulk Bag HT-51
Naqshaddan cusub ee qaab -dhismeedka tubular -ka ayaa ku habboon sidii ikhtiyaar aan xarriiq lahayn oo loogu talagalay alaabada ganaaxa iyo dhumucda leh. Sidoo kale waa beddel aad u fiican dhismihii boorsada jumlada ee hore ee Afar-Guddi.
Bacaha waaweyn ee tuubada waxaa laga sameeyaa polypropylene kaas oo lagu xiro goobo. Qalabka wareegsan ayaa markaa la gooyaa dhererka la rabo iyo xagga hoose, sare (haddii la cayimay) iyo suumanka ayaa lagu tolaa jirka bacda aan xuduud lahayn. Marka la yareeyo tirada tolidda, bacaha bulk -wareegyada ah ayaa sida caadiga ah ah doorashada ugu fiican ee ay ku jirto budo aad u fiican ama badeecad granular ah. Waxa kale oo ay haystaan ​​faa iido fudud ee waaxda adeegsiga maaddaama xariggu iskood isu taagi doono.
Tuubbo labalaab ah oo duuban Bulk Bag HT-50
Boorsada weyn ee tuubada waxaa laga sameeyaa dhar laga tolay suun wareegsan, ka dibna waxaa loo gooyaa dhererka saxda ah ee dhererka boorsada cayiman, taas oo meesha ka saareysa tollihii toosan ee dhinac kasta oo bacda ah. Naqshadeynta jirka tuubada ayaa ku habboon sidii ikhtiyaar aan xarriiq lahayn oo loogu talagalay alaabada ganaaxa ah iyo kuwa aan la arki karin. Sidoo kale waa beddel aad u fiican dhismihii bacdii hore ee afartii guddi.
Tuubbo labalaab ah oo duuban Bulk Bag HT-49
Cabbirka: ballaca 50cm ilaa 260cm
FIBC dib ayaa loo adeegsan karaa marka nolosheeda shaqadu dhammaato, taas oo ka dhigaysa badeecad ku habboon deegaanka. Boorsadu waxay leedahay siddooyin kor u qaadis oo muhiim ah taas oo aan sariirtaad ama baakad labaad looga baahnayn maaraynta. Tani waxay bixisaa kayd aad u weyn xagga kharashka gaadiidka iyo kaydinta. FIBC la daabacay waxay kaloo u shaqaysaa sidii guddi xayaysiis guur -guura oo dhiirrigelisa shirkadaha, summadaha waxayna soo bandhigaan badeecadda muhiimka ah iyo macluumaadka maaraynta.
Tuubbo labalaab ah oo duuban Bulk Bag HT-48
Tuubbo labalaab ah oo duuban Bulk Bag HT-46
Tuubbo labalaab ah oo duuban Bulk Bag HT-18
Biyo-xireen: dahaarka PE oo ku jira (dhumucdiis: 60-300micron)
Weelka weyn ee dhexe ee dabacsan, oo caan ku ah Jumbo Bag, Bag weyn ama Bag Bulk waa weel inta badan ka samaysan polypropylene oo loo isticmaalo baakadaha waaweyn laga bilaabo 500 kgs ilaa 5000 kgs. Waxay qaadi kartaa 1000 jeer miisaankeeda. Qaabkan wax -ku -oolka ah ee wax -ku -oolka ah waxaa loo adeegsadaa in lagu xidho cuntooyinka, dawooyinka, kiimikooyinka, bacriminta, sibidhka iyo alaabo kale oo badan. Waxaa loo habeyn karaa inay ku habboon tahay codsiyada kala duwan maadaama bacda UN -ka la xaqiijiyay loo adeegsado gaadiidka alaabada halista ah, shaandhaynta shaandhaynta budada wanaagsan iyo sidoo kale bacda dhimista korantada si looga fogaado qarax boodh ah.